ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ မျက်စိထိခိုက်ခြင်း - Hello Sayarwon
ကလေးတွင်ဖြစ်သောမျက်လုံးထိခိုက်ခြင်းက များသောအားဖြင့်မပြင်းထန်ပါ။ အဓိကအရေးကြီးဆုံးမှာ ပြင်းထန်သောမျက်စိထိခိုက်ခြင်းကြောင့်အမြင်အာရုံပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်သောကလေးများက မျက်လုံးဝါးသွားသည်ကိုပြောနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောမျက်စိထိခိုက်ခြင်းရှိပါက ချက်ချင်းစမ်းသပ်ပြီး မျက်စိအထူးကုနှင့် သွားရောက်ပြသရန်ညွှန်ကြားပေးနိုင်သည်။
ဓါတုထိခိုက်ခြင်း။ ဓါတုမျက်လုံးထိခိုက်ခြင်းက မျက်လုံးနှင့်မျက်ခွံတွင် ဓါတုပစ္စည်းထိမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်များဆုံးလက္ခဏာမှာ နာခြင်း သို့မဟုတ် လောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မျက်ရည်တောက်လျောက်ထွက်လာခြင်း နီလာခြင်းနှင့် မျက်ခွံယောင်လာခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
မျက်စိတွင်းသွေးယိုခြင်း။ ဆိုလိုသည်မှာ မျက်စိနီခြင်းနှင့် အတွင်းသွေးယိုခြင်းဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နာကျင်ခြင်း၊ အမြင်ထိခိုက်ခြင်းများမရှိပေ။
မျက်လုံးအဖြူသားတွင် အနီစက်များတွေ့နိုင်သည်။ မျက်လုံးအတွင်းရှိသွေးကြောငယ်လေးများကွာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားမျက်စိထိခိုက်မှုရှိ၊ မရှိပေါ်မူတည်ပြီး နီနေသောနေရာကကြီးခြင်း သိသာနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
မျက်စိသွေးယိုခြင်းက ထိခိုက်မှုပြင်းထန်ခြင်းအပေါ်မမူတည်ဘဲ များသောအားဖြင့်ကုသမှု မလိုဘဲ ၄ရက်မှ ၁၀ရက်အတွင်းပျောက်သွားနိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွာပြဲခြင်း။ မျက်ကြည်လွှာပေါ်တွင်ခြစ်မိခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မျက်ကြည်လွှာသည် အကြည်တစ်သျူးတစ်ခုဖြစ်ပြီး မျက်စိသူငယ်အိမ်နှင့် မျက်စိအတွင်းကြွက်သားများပေါ်တွင်ရှိသည်။ ကလေးတွေရဲ့ မျက်ကြည်လွှာကို အရုပ်၊ သတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခု၊ ကလေးလက်သည်း သို့မဟုတ် အပင်နှင့်ထိခိုက်မိပါကဖြစ်နိုင်သည်။ လက္ခဏာများတွင်နာခြင်း မျက်ရည်ထွက်ခြင်း အလင်းမခံနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်သည်။
သူငယ်အိမ်ကြွက်သားယောင်ခြင်း။ သူငယ်အိမ်ကြွက်သားသည်မျက်လုံးရှိအရောင်ရှိသောအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူငယ်အိမ်အတွင်းအလင်းဝင်မှုကိုထိန်းပေးသည့် ကြွက်သားအပိုင်းပါဝင်သည်။ နာခြင်းနှင့် အလင်းမခံနိုင်ခြင်းတု့ိအဓိကဖြစ်တတ်သည်။ မျက်လုံးအတွင်း ကိုက်ခြင်းဖြင့်လည်း လက္ခဏာပြနိုင်သည်။ တစ်ခါတရံမျက်ရည်အများအပြားကျခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဟိုက်ဖီးယား။ထိုထိခိုက်မှုက တုံးသောအရာဝတ္ထုမျက်လုံးနှင့်အနီးတဝိုက်ကိုအားဖြင့်ထိမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စံအနေနှင့် မျက်နှာကို ဘေ့ဘောဖြင့်အပစ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ် ဘောလုံးနှင့်အကန်ခံရခြင်း။
မျက်ခွံရိုးကျိုးခြင်း။လက္ခဏာများတွင် နာခြင်း အဓိကအားဖြင့်မျက်လုံးလှုပ်ပါက၊နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း (မျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်ကပျောက်သွားခြင်း၊မျက်လုံးခွံယောင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအရာက အရေပြားအောက်တွင်သွေးယိုစေပြီး အညိုအမဲစွဲခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။) အနက်ရောင်မျက်လုံးဆိုသည် သွေးများမျက်ခွံအတွင်းစုပုံနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျက်လုံးအောက်ရောင်ခြင်းသည် သင့်အရေပြားပေါ်ရှိသွေးကြောငယ်များ ပေါက်ခြင်းစိမ့်ထွက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လုံးဝပျောက်ကင်းရန် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။
မျက်ခမ်းသားများ စုတ်ပြဲခြင်း။လက္ခဏာများတွင် နာခြင်း နီခြင်း နှင့် မျက်လုံးတွင်းတစ်ခုခုရှိနေသည်ဟုခံစားရခြင်း။
မျက်ကြည်လွာနှင့် မျက်သားဖြူပိုင်းပြဲခြင်း။လက္ခဏာများမှာ အမြင်အာရုံနည်းခြင်း၊ နာခြင်း။
အပြင်အရာဝတ္ထုများရှိခြင်း ဆိုသည် သစ်သားသတ္ထုသို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်အပိုင်းအစ။
မျက်ကြည်လွာ။ မျက်ကြည်လွှာအတွင်းသားမြုပ်ဝင်နေတတ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုခံစားချက်မှာ မျက်စိအတွင်းတစ်ခုခုရှိသည်ဟုခံစားနေရခြင်း မျက်ရည်ထွက်ခြင်း ဝါးခြင်း နှင့်အလင်းမခံနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတရံ ထိုအရာဝတ္ထုကိုမျက်ကြည်လွှာတွင်သာမြင်နိုင်သည်။
မျက်လုံးခွံအတွင်း။ မျက်လုံးခွံအတွင်းရှိနေသော်လည်း မျက်လုံးတွင်းသို့ဖောက်မဝင်သေးပါ။ လက္ခဏာများ ဥပမာ မျက်လုံးအမြင်နည်းခြင်း နာခြင်း နှစ်ထပ်မြင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်မှုပြီး နာရီအနည်းငယ်တွင်စပေါ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမည်သည့်လက္ခဏာမှမပေါ်နိုင်ပါ။
မျက်လုံးတွင်း။ မျက်လုံးအပြင်နံရံကိုပစ္စည်းကဖောက်ဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်စိနာခြင်း အမြင်အာရုံနည်းခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အချို့သူများတွင်လက္ခဏာမရှိနိုင်ပါ။
မျက်ကြည်လွာ အလင်းကြောင့်ထိခိုက်ခြင်း။ မျက်လုံးတွင်းဖြစ်သောအဖြစ်များသည့် အလင်းကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းတွင် ယူဗွီကြောင့်ယောင်ခြင်း(နေလောင်ခြင်းကြောင့်)ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆိုလာ ရတီနိုပက်တီ။ နေကိုစိုက်ကြည့်သဖြင့် ရတီနာအလယ်ပိုင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ အလယ်ပိုင်းနေရာအနည်းငယ် အမြင်အာရုံကျခြင်းကအဓိကလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အဓိကဖြစ်စေသောအကြောင်းမှာ နေအလင်းကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဆွဲနေချိန်နေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်မိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ခရမ်းလွန်ယောင်ကြည်ကြောင့်မျက်ကြည်လွှာယောင်ခြင်း။ လက္ခဏာများတွင် နာခြင်း အလင်းမခံနိုင်ခြင်း နီခြင်း နှင့်မျက်စိထဲတွင်တစ်ခုခုရှိနေသည်ခံစားရခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ လက္ခဏာက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိထိမိခြင်းမှာမပေါ်တတ်ပဲ လေးနာရီလောက်ကြာမှပေါ်တတ်သည်။
သင်မျက်လုံးကို သန့်သောအဝတ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားပြီး ရေဖြင့်များများဆေးသင့်သည်။ ထိုနောက် သန့်သောဂွမ်းဖြင့်ဆယ်မိနစ်ခန့်သွေးမထွက်အောင်ဖိထားပါ။
နူးညံ့သည့် တစ်သျူးသို့မဟုတ် မျက်လုံးနားရှိအရိုးများထိခိုက်ပြီးယောင်လာနိုင်သည်။ ရေခဲဖြင့်မိနစ်၂၀ခန့်ကပ်ထားပါ။ နာနေပါက ကလေးအား အဆီတာမီနိုဖန်သို့မဟုတ် အိုင်ဗျူပရိုဖန်ကိုပေးပါ။ နှစ်ရက်ကြာမှမျက်ကွင်းနက်ခြင်းဖြစ်ပါက မအံ့သြပါနှင့်။ အနက်ရောင်မျက်လုံးက အန္တာရာယ်မရှိသလို အထူးကုသမှုလဲမလိုနိုင်ပါ။ မျက်လုံးတွင်းသွေးယိုခြင်း( စကယ်လာသို့မဟုတ် မျက်လုံးအဖြူအပိုင်းအတွင်း မီးတောက်ပုံအညိုအမဲစွဲခြင်း) သည်လည်းအရမ်းစိတ်ပူရန်မလိုပါ။ ထိုအညိုအမဲက မျက်လုံးအတွင်းသားထဲသို့မပြန့်သွားပါ။ နှစ်ပတ်လောက်ကြာတတ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးမျက်လုံးကိုသန့်စင်သောမျက်လုံးအကာနှင့်ကာထားသင့်ပြီး အောက်ပါတို့ရှိပါက ကလေးဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းခေါ်ပါ။
မျက်ခွံ သို့မဟုတ် မျက်လုံးပေါ်တွင်ပြတ်ရှဒဏ်ရာရှိနေပါက။
မျက်ရည်တောက်လျောက်ကျနေပါက သို့မဟုတ် မျက်တောင်တရစပ်ခတ်နေရပါက။
မျက်ကြည်လွှာတွင်တိမ် သို့မဟုတ် သွေးထွက်နေပါက။
သုံးနှစ်ထက်ငယ်သောကလေးတွင်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာရှာမတွေ့ပါက (အနက်ရောင်မျက်လုံးသိုမဟုတ် မျက်လုံးအဖြူပိုင်းတွင်သွေးထွက်ခြင်း)
အမြင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်နေသည်ပြောပါက ကလေးဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းခေါ်ပါ။
မျက်လုံးအားအရာဝတ္ထုဖောက်ထွက်သွားပါက အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ကလေးအား လေသေနတ်(ဘီဘီသေနတ်)မျိုးဝယ်မပေးပါနှင့်။
Eye Injurieshttp://www.emedicinehealth.com/eye_injuries/article_em.htm. Accessed August 24, 2016.
Eye Injurieshttps://medlineplus.gov/eyeinjuries.html. Accessed August 24, 2016.
Eye injurieshttp://www.nhs.uk/Conditions/Eye-injuries/Pages/Introduction.aspx. Accessed August 24, 2016.